မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဓာတုကထာနှင့် ပဋ္ဌာန်း နှစ်ကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပထမဆုံးပြန်ဆိုခြင်း
၁၂၅၉ နတ်တော်လဆန်း ၄ ရက်
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့
၁၉၈၃ ဇန်နဝါရီ ၆၊ သက်တော် (၈၆)
မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော် (သို့) ဦးနာရဒ (အင်္ဂလိပ်: Mula Patthana Sayadaw U Narada) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်၍ အလွန်ခက်ခဲသည့် ဗုဒ္ဓစာပေ၏ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်မှ ဓာတုကထာနှင့် ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပထမဆုံး ပြန်ဆိုခဲ့သူဖြစ်သည်။
၅ ရေးသားခဲ့သော စာပေများ
အရှင်နာရဒကို ၁၂၅၉ နတ်တော်လဆန်း ၄ ရက်တွင် ဦးစိန်နှင့် ဒေါ်မေတို့က ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဇာတိအရပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့ဖြစ်၏ ။ ဖခင်မှာ စပါးအဝယ်တော်စာရေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မွေးချင်းခုနစ်ဦးအနက် ဆဋ္ဌမမြောက်ဖြစ်၍ မောင်စိန်ထွန်းသည် ဆရာတော်၏ ငယ်အမည်ဖြစ်သည်။
အသက် ၁၆ တွင် ကြို့ပင်ကောက်မြို့ရှိ အင်္ဂလိပ်သာသနာပြုကျောင်း အာရ်စီအမ်ကျောင်းမှ သတ္တမတန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပြည်မြို့ အင်ကြင်းမြိုင်ဆရာတော်ကို ဥပဇ္ဈပြု၍ သာသနာ့ဘောင်သို့ ခေတ္တဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါးလခန့်ကြာသောအခါ လူထွက်၍ မိသားစုနှင့်အတူ ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ လူဝတ်ကြောင်အနေဖြင့်ပင် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ခဲ့ကာ သာသနာ့ဘောင်သို့ စ်တ်တိမ်းညွတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အသက် ၁၉ နှစ်ပြည့်သောအခါ ခဝဲဆရာတော်ကို ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာထား၍ ရဟန်းခံခဲ့သည်။
မူလက တရားအားထုတ်ရန် ရဟန်းပြုခဲ့သော်လည်း အသက်ရွယ်ငယ်သေးသောကြောင့် စာပေများကို သင်ကြားခဲဘသည်။ ပြည်မြို့ရှိ ခေမာရုံ (ယခု ဂန္ဓာရုံ အဖြစ်) ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘင်္ဂလားတိုက်တို့တွင် စာပေများ ငါးနှစ်တိုင်သင်ကြားလေ့လာခဲ့သည်။ ဤတိုက်နှစ်တိုက်တွင် သင်ကြားစဉ်နှင့် သင်ကြားအပြီးကာလများ၌ အစိုးရ ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီး စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။
မန္တလေးသို့ သွားရောက်၍လည်း ပရိယတ္တိစာပေများကို သင်ယူခဲ့ရာ မစိုးရိမ်တိုက် ပထမကျော်ဆရာတော် ဦးဉာဏ၊ ဦးကြည် (သို့) အရှင်အာဒိစ္စရံသီ၊ ဘုရားကြီးတိုက်မှ ဦးဇာဂရနှင့် ဦးဝိမလ၊ မြင်းဝန်တိုက်၊ အမရပူရမြို့မှ စာသင်စာချဆရာတော်များထံတွင် လေ့လာခဲ့၍ ပခုက္ကူမြို့တွင်လည်း စာပေသင်အံခဲ့လေသည်။
ရဟန်း (၁၂) ဝါ၌ ခင်ဦးမြို့ ရွှေဘေးကင်းတောရတွင် တရားအားထုတ်ခဲ့၍ စာပေလည်း သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထို၌ ပဋ္ဌန်ကျမ်းကို အားစိုက်လေ့လာကာ ဇယားများဖြင့် သင်ကြားနည်းစနစ်သစ်များတီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆရာတော်ကြီးများ၊ ဒါယကာများ၏ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုများဖြင့် စစ်ကိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တို့တွင် ပဋ္ဌာန်းတရား သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်ပင် ပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဟူ၍ အမည်တွင်ခဲ့သည်။
ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ရာ၌လည်း သုတ်သိလက္ခန်၊ ယမိုက်၊ ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်များ၊ ပဉ္စပကရဏ အဋ္ဌကထာ စသည်တို့ကို သုတ်သင်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ထိုသင်္ဂါယနာပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသော နိုင်ငံခြားသားများကို သင်္ဂြိုဟ်၊ ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းများ ပို့ချပေးခဲ့သည်။
၁၉၈၃ ဇန်နဝါရီ ၆ တွင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။
အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီး၏ ပထမဦးဆုံး ဩဝါဒါ စရိယ ဆရာတော်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ပိဋကတ်ဘာသာပြန်စာပေဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းတွင် တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ပါဠိစာပေအသင်းဥက္ကဋ္ဌ မစ် ဒေါက်တာ အိုင် ဘီ ဟော်နာ (Miss I. B Horner) က ဆရာတော်နာရဒထံ ချဉ်းကပ်၍ ဓာတုကထာနှင့် ပဋ္ဌာန်းကျမ်းများကို ဘာသာပြန်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခဲ့သောကြောင့် ဓာတုကထာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ၁၉၆၂ တွင် ပြန်ဆိုခဲ့ကာ လန်ဒန်ပါဠိစာပေအသင်းက ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်၏ နောက်ဆုံးကျမ်းစာဖြစ်သော ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို Conditional Relations အမည်ဖြင့် ပထမတွဲကို ၁၉၆၉ တွင်လည်းကောင်း ဒုတိယတွဲကို ၁၉၈၁ တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ရေးသားပြုစုခဲ့၏ ။ ပထမတွဲ၏ အမှာစကားတွင် မစ္စ အိုင် ဘီ ဟောနာက မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်၏ ဤကျမ်းကို ဇယားများနှင့်အတူ ဘာသာပြန်မှု၊ ရှင်းလင်းပြသမှုသည် အလွန်တရာ ရှင်းလင်းပါကြောင်း၊ ဤလက်ရာကို အစားထိုးနိုင်မည့် နောက်ထပ်စာအုပ်ရှိမည်ဟုပင် တွေးရန်ခက်ပါကြောင်း စသည်တို့ကို ရေးသားခဲ့၍ အမှာစာနောက်ဆုံးတွင် ပါဠိစာပေအသင်းက မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော် ဦးနာရဒကို နက်နဲသည့်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် ကူညီပေးခဲ့သော ဦးသိန်းညွန့်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းများဆိုထားသည်။
၁၃၄၀ တွင် ဆရာတော်ကို အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့တံဆိပ်ချီးမြှင့်ဆပ်ကပ်ခဲ့သည်။
သင်္ဂြိုဟ် ၉ ပိုင်း သရုပ်ခွဲဇယား
Discourse on Elements (၁၉၆၂)
Conditional Relations (Vol. 1) (၁၉၆၉)
Guide to Conditional Relations (၁၉၈၀)
Conditional Relations (Vol. 2) (၁၉၈၁)
အထက်ပါ ကျမ်းလေးခုစလုံးကို လန်ဒန်ပါဠိစာပေအသင်းမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
↑ THE ABHIDHAMMAPITAKA, Basket of Transcendental Doctrine, M.M.Gyi, Vol. 1, No. 3, 1981
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ မောင်ဇေယျာ (မေ ၂၀၀၃)။ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကမ္ဘာသိစေခဲ့သောမြန်မာများ။ ရန်ကုန်: စန်းရောင်ရှိန်စာပေ။ pp. ၃၅-၄၂။
↑ ဓမ္မမော်ကွန်းတိုက်၊ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံ
↑ Tipitaka Translation Conference
↑ U Ko Lay (Professor, Vipassana Department, Faculty of Pattipatti) (1998)။ The Myanmar Contribution to the Spread of Theravada Buddhism throughout the World။ “The most erudite Sayadaw U Narada of Patthana fame was approached by Miss I.B. Horner to tackle the highly abstruse and expansive treatise of Patthana Pali, ... it appeared in 1962 as Discourse on Elements.”
↑ အရှင်နာရဒ၏ စာအုပ်များ၊ Myanmarbookshop.com
↑ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)၊ စာအုပ်စဉ်
↑ Discourse on Elements (Dhātukathā). U Nārada, Mūla Paṭṭhāna Sayadaw. pp. 155 +7illustrations Luzac & Co. Ltd., for The Pali Text Society. 1962. 63s.
↑ ၉.၀ ၉.၁ Conditional Relations,, tr. Ven. U Narada,2volumes
↑ Guide to Conditional Relations: Part 1: Being the Guide to Pages 1-12 of Conditional Relations Patthana. U. Narada Mula Patthana Sayadaw,ISBN 10: 0710002807 / ISBN 13: 9780710002808, abebooks.com
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်&oldid=677135" မှ ရယူရန်